Diyaar garow dagaal oo ka taagan gobalka Gedo. – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTADiyaar garow dagaal oo ka taagan gobalka Gedo.
Diyaar garow dagaal oo ka taagan gobalka Gedo.
Wararka naga soo gaarayo gobalka Gedo ayaa soo sheegaya in dhaq dhaqaaqyo ciidan ay ka jirto degmooyin ka tirsan gobalkaasi Gedo oo dhaca koofurta Galbeed ee Soomaaliya.
Saraakiil ka tirsan Milatariga Soomaaliya ayaa sheegay in ay wadaan diyaar garow dagaal kadib markii ay dareemeyn culees soo food saaray oo ka yimid dhinaca Shabaab, maadaaba ay Shabaab kusii kordhayaan deegaano ka mid ah gobalkaasi Gedo.
“waxaan wadnaa dhaq dhaqaaq ciidan iyo abaabul aan gobalka uga saareyn Al-shabaab, waxaan qabnaa amar Madaxweyne oo ah in aan difaacno deegaanka iyo dadka, maalmaha soo socda waxaan qaadi doonaa Howlgal lagu soo afjarayo Al-shabaabka ku sugan Gedo” sidaas waxaa Warqaat.Com u sheegay sarkaal ka mid ah Ciidamada Xoogga ee gobalka Gedo.
Gobalka Gedo ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa ka taagnaa dhaq dhaqaaqyo ciidan oo ay wadayn Labada dhinac ee Dowladda iyo Shabaab, mas’uuliyiinta gobalka Gedo ayaa sheegay in ay jiraan warar sheegaya in Shabaab ay soo galayaan gobalkaasi.
Q.M oo sheegtay in Al-qaacidda ku xoog badan tahay Somaliya
53,056 total views, 943 views today
53,056 total views, 943 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
53,126 total views, 943 views today
53,126 total views, 943 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
53,137 total views, 943 views today
53,137 total views, 943 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
53,159 total views, 944 views today
53,159 total views, 944 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
53,197 total views, 944 views today
53,197 total views, 944 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]